စစ်တွေကျရင် အနောက်တံခါး ကျိုးပေါက် သွားမယ့် အခြေအနေ နဲ့ ဗီဇ ပြောင်းလဲလာတဲ့ “ကိုဗစ်” – အနုပညာရပ်ဝန်း
စစ်တွေကျရင် အနောက်တံခါး ကျိုးပေါက် သွားမယ့် အခြေအနေ နဲ့ ဗီဇ ပြောင်းလဲလာတဲ့ “ကိုဗစ်”
အခု တလော D614G ကိုဗစ် ဗိုင်းရပ်စ်ဗီဇမျိုးကွဲ အကြောင်း လူပြောများနေကြတယ်။ D614G ကို G mutation လို့လည်းခေါ်ကြတယ်။ မလေးရှားကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနညွှန်ချုပ်က မလေးရှားမှာတွေ့ကြောင်း ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ကပြောတယ်။ တွေ့ရပုံကိုသိထားသင့်လို့ပြန်ပြောပြပါမယ်။ အိန္ဒိယက ပြန်လာတဲ့ စားသောက်ဆိုင် ပိုင်ရှင် တစ်ယောက်ဟာ ၁၄ ရက် ကွာရန်တင်းဝင်ရမှာကို စည်းကမ်း ချိုးဖောက် ခဲ့သတဲ့။ သူကနေစ လိုက်တာ ၄၅ ယောက် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကူးစက်မှုကို ဖြစ်စေခဲ့သတဲ့။ အဲ့ဒါ ကြောင့် ခိုးဝင်တွေကို လုံးဝ မဝင်နိုင်အောင် တားကြပါ။
ပြည်ပက Fast Track နဲ့ လာတဲ့ သူတွေကို ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် ကိုင်တွယ်ကြပါလို့ ပြောနေရ တာပါ။ အဲ့ဒီ ၄၅ ယောက်ကနေ ဘယ်လောက် ဆက်ပြန့်မယ်လို့ မသိရသေးဘူး။ အဲ့ဒီ ၄၅ ယောက်ထဲမှာ အနည်းဆုံး ၃ ယောက်က D614G ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲ ဖြစ်နေသတဲ့။ ဒါပဲသိရတယ်။ ၄၅ ယောက်စလုံးက D614G လား၊ ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ ဆိုတာ အတိအကျ မသိရသေးဘူး။ D614G လို့ခေါ်ရတာက အမိုင်နိုအက်ဆစ်ပြောင်း လို့။ အမိုင်နိုအက်ဆစ် နေရာ 614 မှာ D (aspartic acid) ကနေ G (glycine) ကို ပြောင်းသွား လို့။ အဲ့လိုလေးပြောင်း လိုက်တာနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်က အစွမ်းသတ္တိနည်းနည်းပြောင်းသွားရော။ ဘာလို့ mutation လို့ခေါ်တဲ့ မျိုးဗီဇ ကွဲသွား ရတာလဲ? ကျနော်အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာနဲ့ရှင်းပြပါမယ်။ မိတ္တူကူးဖူးတယ်မလား? မိတ္တူကူးရင် မူရင်းနဲ့ နည်းနည်းလေးကွဲသွားတယ် မလား? အဲ့သဘောပဲ။
ဗိုင်းရပ်စ်အတွက် mutation မျိုးဗီဇကွဲခြင်းဆိုတာ ပုံမှန်ဘဝစက်ဝန်း (normal part of life-cycle) တစ်ခုပဲ။ ဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲ ဆိုရင် ဗိုင်းရပ်စ်က လက်ခံကောင် ရဲ့ ဆဲလ်ထဲကို ဝင်ပြီးမျိုးပွားရတယ်။ အဲ့လို့မျိုးဝင်ပွားချိန် မှာ မျိုးဗီဇအချက်အလက် (genetic data) တွေကို ကော်ပီကူးရတယ်။ အဲ့လိုကော်ပီ ကူးစဉ်မှာ နည်းနည်းလေး ဗီဇ လွဲတတ်တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဗီဇနည်းနည်းကွဲတဲ့ mutation အသစ်ပေါ်လာတာ။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲ့ဒီ D614G က အရင်သူ့ဘိုးအေတွေ ထက် ဆယ်ဆလောက်ပိုးကူးစက်လွယ်သတဲ့။ University of Glasgow က Oscar MacLean ရဲ့ အပြောအရ အခု Covid-19 ကပ်မှာ အသေးစိတ်ပြော ရရင် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် mutation ပေါင်း ၂၀၀၀၀ လောက်အထိရှိပြီး D614G က လူသိများလာတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ လူငယ်လူရွယ်တွေမှာ ကူးစက်တာကိုတွေ့ရများလာလို့။ ဒါ့ကြောင့် အရင်ကထက်ပိုကူးစက်လွယ်တယ်လို့ပြောလာကြတာ။
အခုလိုပိုမိုကူးစက်လွယ်တော့ ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ? D614G ဟာ Darwinian advantage ကို သက်သေပြတယ်။ သဘောက အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာ သူဆက်လက်ရှင်သန်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ ဒါကြောင့်လူများများကိုကူးစက်ပြီးမျိုးပွားဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ ကောင်းတဲ့အချက်ကိုပြောပြမယ်နော်။ ယေဘုယျအားဖြင့် တစ်ခုပိုလာရင် တစ်ခုလျော့သွားတတ်တယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ကူးစက်မှုပိုလွယ်ပြီး များများကူးရင် ရောဂါပြင်းထန်စေမှုလျော့ကျသွားလေ့ရှိတယ်။ ဒါဆိုရင် အခု D614G ဟာ ရောဂါပြင်းထန်မှုလျော့ကျသက်သာသွားမှာလား?
အဲ့လိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ University of East Anglia က Professor Paul Hunter ကပြော ပါတယ်။ သို့သော် suggestion အဆင့်ပဲရှိပါတယ်။ real evidence တကယ့် သက်သေမပြနိုင်သေးပါတဲ့။ စင်ကာပူ National University of Singapore က senior consultant ဖြစ်သူ Paul Tambyah က လည်း D614G ဟာ ကူးစက်လွယ်ပြီး သေနှုန်းတော့လျော့သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့။ သူက International Society of Infectious Diseases ရဲ့ ရွေးကောက်ခံဥက္ကဌလည်းဟုတ်တယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့ အကျိုးအကြောင်း အဆိုးအကောင်းအကုန်သိစေချင်တာမို့ စိတ်ချမ်းသာစရာမျှော်လင့်ချက်ရှိရင်လည်း ထည့်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “May be that’sagood thing to haveavirus that is more infectious but less deadly” လို့ Paul ကပြောခဲ့တာ။
May be လို့ပြောလို့ ဖြစ်နိုင်တယ်ပဲပြောတာ။ အတိအကျ ပြောမရသေးဘူး။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ ယနေ့ Covid-19 အခြေအနေကို လေ့လာကြည့်ရင် လူသေဆုံးမှုနှုန်းတော်တော်ကျသွားတာကို တွေ့ရတယ်။ ယနေ့အထိ လူပေါင်း ၂၂.၆၇ သန်းအကူးစက်ခံထားရတယ်။ အတိအကျပြောရရင် ၂၂၆၆၇၈၃၃ ယောက်။ လက်ရှိကုသနေရတဲ့လူနာပေါင်း ၆၅၀၁၈၅၇ ယောက်မှာ ၆၁၉၄၇ ယောက်က အသည်းအသန်ကုနေရသူတွေဖြစ်တာကြောင့် စုစုပေါင်းရဲ့ ၁ ရာနှုန်းပဲရှိတော့တယ်။ ပိတ်လိုက်တဲ့ case ပေါင်း ၁၆ သန်းကျော်မှာ ၇၉၂၇၄၈ ယောက်သေဆုံးခဲ့တာကြောင့် သေဆုံးမှု ၅ ရာနှုန်းပဲရှိတော့တယ်။ အရင်၂၀ ရာနှုန်းက ကျလာတာဖြစ်တယ်။
ဒါဆိုရင် D614G ဖြစ်သွားလို့ #အကူးစက်လွယ်ပြီး သေနှုန်းကျသွားတာလား? အဲ့လိုကံသေကံမပြောလို့ကိုမရသေးတာ။ လူသေနှုန်းကျသွားတယ်ဆိုတာက Covid-19 အကြောင်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေက အရင်ကထက်ပိုနားလည်လာတာ။ အသက်ကြီးသူတွေ၊ နာတာရှည်ရောဂါသည်တွေကို မကူးအောင်ပိုဂရုစိုက်တာ။ ဆေးဝါးတွေက နဂို ထက်ပိုကောင်းလာတာ။ သွေးရည်ကြည်ကုထုံးလိုမျိုးတွေပေါ်လာတာ။ အနောက်နိုင်ငံက လူတွေက Covid-19 က သေတတ်မှန်းပိုမိုသိလာပြီး တစ်ခါသေဖူးပျဉ်ဖိုးနားလည်လာကြတာ။ အခုဖြစ်နေတဲ့ အမေရိကန်လိုနေရာတွေမှာက ပိုမိုပြည့်စုံတဲ့ ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေရှိတာ။ အဲ့ဒီမှာမှ ဆင်းရဲတဲ့ လူတွေမှာ ပိုသေဆုံးမှု များတာ တွေ့ရတယ်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်နိုင်မှု အားနည်းလို့။ အဲ့ဒီတော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ပြောရရင် D614G က လူလတ်ပိုင်းကို ကူးလို့မသေဖို့များပေမယ့် သူတို့ကတဆင့် အိမ်ကမိသားစုဝင် သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ ဆီးချိုသွေးချို၊ နှလုံးသွေးတိုးစတဲ့ နာတာရှည်ရောဂါသည်တွေကိုတော့ ချမ်းသာပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ဆေးရုံတွေရဲ့ဘက်ဂျက်နဲ့အခြေအနေနဲ့ ကျန်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအတော်များများရဲ့ အခြေအနေက တစ်ခြားစီပါ။ အဲ့ဒီတော့ ကိုယ့်အိမ်က မိဘတွေကို တကယ်ချစ်ခင်ကာကွယ်ချင်ရင် မကူးစက်အောင်၊ ကူးစက်ရင်တောင်ပိုးပမာဏနည်းအောင် Mask ကို စနစ်တကျမဖြစ်မနေသုံးစွဲကြပါ။
တစ်ခုကျနော်လေ့လာစောင့်ကြည့် မိသလောက် က နေ့စဉ်ကူးစက်နှုန်း (Daily New Cases) ရဲ့ curve က မြင့်တက် မလာပဲ အကျဘက်ကို သန်းစပြုနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေပေါ့ဆလို့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၁၀၀ လောက်တုန်းကလို ဒုတိယလှိုင်းဝင်ခဲ့ရင် မလွယ်ပါ။ ဒုတိယလှိုင်းသည် ပိုအန္တရာယ်များပါတယ်။ စစ်တွေကိုဘယ်လိုရောက်လာသလဲဆိုတာ စိစစ်ပြီးတော့သင်ခန်းစာယူကြပါ။ ယိုပေါက်ကတော့ရှိနေပါပြီ။ နယ်စပ် ကနေခိုးဝင် နေမှုတွေကို ကြပ်ကြပ် မတ်မတ်ကိုင် တွယ်ကြပါ။ ရောဂါအလွန်ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေက Fast Track နဲ့ ၂၁ ရက် Q မဝင်ပဲလာရင် လက်ခံသင့်မသင့် ပြန်စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ်ခင်ဗျား။ D614G ဟာ Covid ကာကွယ်ဆေး ပေါ်လာရင်တိုးပါ့မလား? အခုအထိတွေ့ရှိချက်အရ Covid ကာကွယ်ဆေးက D614G ကို ကာကွယ်မှုပေးနိုင်မယ်လို့ ယူဆထားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကာကွယ်ဆေး အတွက် သိပ်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ အခုထိသိရသမျှ D614G အကြောင်းပါခင်ဗျား။ Lockdown ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးထိခိုက်ကာ အငတ်ဘေး အဆိုက်ခံမလား စည်းကမ်းလိုက်နာကြမလား ရွေးကြရပါတော့မယ်။
ပွဲကြမ်းနေပြီဗျာ ?? အမတ်မင်းကိုရွာသားတွေမောင်းထုတ်နေတဲ့(ရုပ်သံ)
စစ်တွေမြို့တွင် လူနာသစ် ၁၀ ဦး ထပ်တွေ့၊ စုစုပေါင်း အတည်ပြုလူနာ ၄၀၉ ဦး ရှိပြီ